Archive du 20180412
Zandarimariam-pirenena Tompon’andraikitra ambony 24 nesorina
Nisy fanovana ny komandy ambonin’ny zandarimariam-pirenena ny sabotsy 7 aprily lasa teo. Nanaitra sy nampieritreritra ny fahafantarana fa tompon’andraikitra ambony 24 mirahalahy be izao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena no nesorina tamin’ny toerany ary notendrena ny olona vaovao hitantana.
TIM sy MAPAR Fiaraha-mientana fa tsy fiaraha-miasa
Samy manana ny hanitra ho azy ny TIM sy ny MAPAR, ary tsy misy ny fifanaraham-piaraha-miasa fa fitoviam-pijery no misy, hoy ny depioten’i Madagasikara voafidy teny Ambohidratrimo Mamy Rabenirina omaly, tao amin’ny fandaharana Bemiray an’ny onjam-peon’ny Top Radio 102.8 FM.
Kandida ben’ny tanàna tsy lany Tsy afaka manao mpanolotsaina intsony
Lany tamin’ny tsangan-tanan’ny depiote niisa 36 nanaiky ilay volavolan-dalàna lah 002/2018 manova sy mameno ny lalàna lah 2014-020 mikasika ny “ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élection, ainsi qu’à l’organisation au fonctionnement et aux attributions de leurs organes”.
Praiminisitra eto Madagasikara Tena ilaina marina ve ?
Nisongadina hatrany teto amin’ny firenena ny olana momba ny fanendrena praiminisitra, ny fifanolanana sy fifandrafesana eo aminy sy ny filoha. Tsy mazava ny fanendrena azy ary rehefa tonga eo dia matetika lasa olana ho an’ny filoha raha zohiana ny tantara. Hatraiza ny fahefan’ny praiminisitra, ary tena ilaina tokoa ve ?
Fiainam-pirenena Mihetsika ireo jeneraly misotro ronono
Nifoha tamin`ny torimasony ihany koa ireo manamboninahitra ambony misotro ronono manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan`ny firenena izao. Kihon-dalana ho an`ny firenena tokoa ity taona 2018 ity noho izy taom-pifidianana.
Rafitra mahaleotena Anarany fotsiny ny an’ny Bianco sy ny CENI
Vaomieram-pirenena tena mahaleotena momba ny fifidianana ny CENI, ary ny Bianco kosa, dia Birao Mahaleotena misahana ny ady amin’ny kolikoly.
Fanondranana hazo sarobidy Nangina tanteraka ny fitsarana
Tamin’ny fiandohan’ny taona 2009 no tena nampalaza ny fanondranana ny hazo sarobidin’i Madagasikara. Hazo sarobidy tahaka ny andramena sy voamboana an-jatony no nolazaina fa tapaka isan’andro tamin’izany.
HAFARI Malagasy Hangataka tanim-panjakana hanampiana ireo rava trano
Onena ireo olona rava trano marobe eto an-drenivohitra ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Ady tany eny Anosibe Lasa amin’ny anaran’ny mpanofa ny trano…
Tany iorenan’ny Villa Manohisoa sy ny Villa Soniedanana eny Anosibe akaikin’ny lalamby no miteraka fifanolanana eo amin’ny mpianakavy ary tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny mpanofa trano.
Rugby « Coupe Analamanga » Etsy Mahamasina ny famaranana
Noho ny fanajana sy fiaraha-mientana tamin’ny lalao iraisam-pirenena teo amin’ny taranja rugby notontosaina teto amintsika tao ho ao, ny “Top 6 de l’Océan Indien”,
Baolina kitra « Ligue 1 » Analamanga Lavon’i Mama Fc 2-1 ny Cospn
Tontosa omaly alarobia 11 aprily 2018 teny amin’ny kianjan’i Carion sy tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina niaraka ny andro faha-11 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra eto Analamanga sokajy « ligue 1 ».
Klioba Lomano St Michel Nahatontosa ny « Vive l’Avenir » andiany faha-8
Toy ny fanaon’izy ireo isan-taona dia nanatanteraka ny hetsika lomano « Vive l’Avenir » andiany faha-8 tetsy amin’ny dobo filomosana ANS Ampefiloha nandritra ny roa andro, ny sabotsy 7 sy alahady 8 aprily 2018 lasa teo ny klioba Lomano St Michel Analamanga.
Edito Odiaina no ilaina
Tsaroan’ny rehetra tsara angamba fa ny banky foiben’i Madagasikara mihitsy no nanizingizina raha vao nivoaka ilay 20.000 ariary tokana iny hoe ireo mpandraharaha vaventy ihany no natao hikirakira ny vola tahaka ireny.
Fiakaran’ny saran-dalana 500 ariary no tanjon’ireo mpitatitra, hoy ny RNDC
Manohitra amin’ny heriny tanteraka ny fiakaran’ny saran-dalana ho 700 Ar manomboka amin’ny 25 aprily ho avy izao ny fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa RNDC tarihin’ny filohany Rabetsara Lita.
Fanavaozana ny RN2 Maharitra 2 ora ny fitohanana
Mahatsiravina ireo mpampiasa lalana amin’iny lalam-pirenena faharoa iny ny fitohanana ateraky ny fanamboaran-dalana mihazo an’i Brickaville.
Fiara eto Madagasikara Mitombo hatrany ny isan’ny mpanjifa
Raha misy ny tena mahasorena ny mponina eto an-drenivohitra dia ny fitohanan`ny fiara lavareny izay miha mitombo isan-taona. Ny lalana ihany koa miha simba sy miha tery.